Ducada Anima Keligeed Si Qofku U Yimaado [+]?
U ducee nafta oo kali ah si qofka looga dhigo Waxay noqon kartaa hub qarsoodi ah oo na caawisa waqtiyadaas aan cid kale qaban karin.
Waqtiyadaas aan jecelnahay nafteena oo dhan si aan u aragno qofkaas laakiin ma ogin waxa ama sida loo sameeyo sidaa darteed iyada ayaa go'aansata nafsadeeda inay u timaado inay na aragto, kani waa duco noo anfici doonta waqtigaas.
1 U ducee nafta oo keli ah si ay qofka u timaaddo Muxuu yahay?
1.1 U ducee nafta oo kali ah si qofka looga dhigo
3 Tukashadani awood ma leedahay?
U ducee nafta oo keli ah si ay qofka u timaaddo Muxuu yahay?
Waxay u adeegtaa wax badan si loo sameeyo qofkaas kaalay la kulan sidii looga yeeli lahaa inuu nala soo xiriiro.
Baahida loo abuuray qofkaas inuu na arko wuxuu sii kordhayaa ilaa uu ina soo booqdo waa lama huraan.
Aalad awood leh oo aan ugu adeegsan karno iimaan markasta oo aan rabno, iyadoo aan loo eegin inay maalin walba tahay.
Anima Sola, awliyadayda barakaysan, waxaan kaa baryayaa iimaan weyn inaad ka dhigto qofkan ...
(magaca qofka oo buuxa)
Waxaan ku laabtay gacmahayga, in laga bilaabo maanta waxaan dareemayaa inaan wali ku soo biireyno xiriirada jaceylka, waxaan kuu baryaa, awoodaada weyn ee aad ku soo laabato qalbi furan aniga iyo waxna kaa weeydiineynin dhinacyadeyda, inaad sii wado jaceylka nafta, jirka iyo ruuxa. , hadda iyo weligeedba.
Waxaan kuugu baryaa baryadaan nafteyda kaligeed inaad kadhigto qof inuu yimaado, Anima Alone, kaalmee isii.
Waxaan kaa baryayaa Anima Kaliil, aaminaadaada oo dhan, inaad ku sameyso, hadiyaddaada mucjisada ah, in sidaan jeclahay ay aad iigu soo laabato dhinaceyga, qalbi jaceyl iyo garasho buuxda leh, taas.
Kalsoonow, waxaan kuu duceeyaa adigaan kuu duceeyey, oo iga fogaaday, waxaan kaa baryayaa, ha iloobin, waayo, had iyo goor maan maskaxdaada ku jiro.
Waxaana kuu balan qaadayaa in sida ugu dhaqsaha badan qofkani u soo noqdo,, Waxaan kuu sameyn doonaa waxyaabaha soo socda, _waad mahadsantahay
Xusuusnow inaysan jirin deegaan gaar ah, maalin ama xaalad lagu tukado.
Waxaa lagu samayn karaa wakhti kasta ama goob kasta.
Hadaad rabto inaad laambad shido ama aad sameyso jawi aad u yar kahor intaadan tukan, taasi waa fiican tahay, laakiin taasi ma ahan inaad salaadda ka dhigeyso mid sii yaraaneysa ama xoog badan.
Khaas ah in la sameeyo kiisaska uu jiro xubin qoyska ka mid ah oo maqan ama la afduubay oo xitaa lagu dabaqi karo xayawaanka gurijoogta ah.
Awoodda iyo waxtarka salaaddani waa mid la yaab leh si kasta oo ay mucjisadu u adag tahay.
Waa inaan maalin walba tukanaa. Waa inaan aaminsanahay salaadda oo aan rumeyno.
Hadaynaan iimaan lahayn anaga dan kama laha.
Waxaad u maleynaysaa inay si wanaagsan u shaqeyn doonto. In uu qof kuu maqli doono oo uu kaa caawin doono codsigaaga.
Kaliya tukada hal mar maalintii, adigoo leh iimaan iyo xoog. Muddo yar gudahood amarkaaga ayaa la xaadiri doonaa adiguna waad ku farxi doontaa.
Hadaad rabto, laambad shumac cad ama shumac casaan mahadsanid.
Shumacyada ayaa u adeega bixin Hay'adaha inaga caawiya amaradeena.
Waa wax fudud, laakiin aad waxtar u leh.
Tukashadani awood ma leedahay?
Dunida Ruuxi ahaaneed waa xaqiiqo dhab ah oo inagu xeeran oo xaqiiqda ah in aanaan rabin inaan si dhab ah u qaadanno macnaheedu maaha inaysan jirin, taasi waa sababta ka dhigaysa kuwa aaladaha ruuxi ah ee aan annagu leenahay inay sii kordhayaan.
ka salaadda laga sameeyay nafta waxay la timaadaa awood gaar ah maxaa yeelay waxba ma jecla daacada markay la hadlayaan ruux ruuxi ah.
Taasi waa mid sharciga in lagu fuliyay salaadda oo dhan nolosha lagu sameeyey, qof kasta oo ay tahay, waa in had iyo jeer lagu sameeyaa iimaan maxaa yeelay waa shuruudda kaliya ee hubinaysa in salaadda jawaab ka heli doonto.
U soo ducee salaadda nafta oo keliya si aad qofka uga dhigto iimaan. Wax walbana way hagaagi doonaan.